IZINTO ZOKUTHENGISA ITYHEFU | UTHINTELO - IMPILO
Izinto zeNtengiso zeYard eziyityhefu ezingafanelekanga ukuba zithengiswe
isuzanne tucker / shutterstock isuzanne tucker / shutterstock
Ukuthenga into esetyenzisiweyo endaweni yeendlela ezintsha uzigcinile ngaphandle komhlaba. Nangona kunjalo, kukho izinto ezithile ezingasifanelanga isivumelwano. Cofa uze ubone ukuba zeziphi izisulu ezisetyenzisiweyo ezinokuba yingozi kwimpilo yakho.
Ngaba uyayithanda le nto uyifundayo? Bhalisela i Incwadana yeendaba yanamhlanje ye-Organic Life kuba kufuneka ube neengcebiso ezithunyelwe kwi-inbox yakho.
Inqaku Izinto zokuThengiswa kweYard eziyityhefu ezingafanelekanga ukuba zithengiswe ekuqaleni begijime kwiRodalesOrganicLife.com.
Iibhotile zabantwana + Iikomityi zeSippy ifamveld / shutterstock
Kungabonakala ngathi yinto elungileyo ukuthenga iibhotile kunye neekomityi ze-sippy emva koko kuba iya kuba yiminyaka embalwa ngaphambi kokuba umntwana wakho abaphume. Nangona kunjalo, i-FDA yathintela kuphela i-BPA-isiphazamisi se-endocrine esiye sanxulunyaniswa nezinye iintlobo zomhlaza kwizifundo zezilwanyana- ukusuka kwiziselo zabantwana njenge kutshanje ngo-2012 . Oko kuthetha ukuba uninzi lwezinto kwintengiso yegaraji mhlawumbi zinayo ikhemikhali. Khangela inombolo yokurisayikilisha engu-7 emazantsi eebhotile; ihlala icetyiswa ukuba imveliso iqulethe i-BPA.
Izinto zokudlala OKSANA KUZMINA / SHUTTERSTOCK
Uyakhumbula phaya ngo-2007 xa zonke iithoyi ezenziwe eTshayina zakhunjulwa kuba zazenziwe ngepeyinti esekwe kwilothe? Ewe, kukho ithuba elihle lokuba ezinye zazo zisavela kwintengiso yeyadi. Kwaye asithethi nje ngezinto zokudlala ezinamaxabiso aphantsi ukusuka kwivenkile yeepesenti ezingama-99 . Inkqubo ye- ukukhumbula kubandakanya Igama loololiwe oololiwe kunye neemoto zentsimbi ezincinci, kunye nezinto ezininzi zexabiso lokuloba ezinabalinganiswa abathandwa ngabantwana. Izinto zakudala kunye nezinto eziqokelelweyo zinokukhokelela nazo, ke lumka malunga nokuzongeza kwigumbi lokudlala. Kuba ikho akukho nqanaba elikhuselekileyo lokuvezwa kwelothe kuhlawula ukulumka. Isitampu esithi 'Yenziwe e-China' kwiithoyi ezintsha kunokuba kukucetyiswa okukhoyo.
Iipijama uhambo / ishutterstock
Imichiza eneklorini iTris yayisetyenziselwa ukunyanga ii-PJs phaya ngeminyaka yee-1970. Kwakubonakala ngathi ulumkiso olufanelekileyo xa kusenzeka umlilo kwindlu ezinzulwini zobusuku de izazinzulu zaqonda ukuba iTris chlorinated yi umhlaza-unobangela kwaye unokuba nefuthe elonakalisayo kwi-DNA . Ke ngelixa ezi pyjama zokuvuna zinokuba noshicilelo olumnandi, hlala kude.
ITupperware endala ngokukhululekileyo / shutterstock
Ukumkanikazi wentengiso yeeyadi, ii-iconic ze-1950s izikhongozeli ziza ngemibala emnandi kwaye zibonakala ngathi zihlala ngonaphakade. Kodwa bambelela. Ngokwe- iwebhusayithi yenkampani , ITupperware yaya kuphela-i-BPA-simahla ngo-2010 ukuthandabuza ukhuseleko lweplastiki yasimahla ye-BPA , Kuya kufuneka ukuba uhlale kude kwezi ntlobo zezikhongozeli zokutya ngokubanzi. Khetha iglasi xa unako okanye ezi zivuzayo kunye ne-dishwasher-safe izikhongozeli steel stainless ezineziciko zeplastiki ezingenasifo kunye ne-BPA. Kwaye ukuba usebenzisa iTupperware ukugcina ukutya okuseleyo, tshintshela ukutya kwipleyiti ngaphambi kokuba kusetyenziswe i-microwave, kuba ukufudumeza kuya kufaka imichiza emininzi kukutya kwakho.
Iinto zokuzilungisa iafrika studio / shutterstock
Nazi iitoni zezithako ezithandabuzekayo Njenge-DEA ekwenzeni ukuqala, kwaye nokuba ufumana into engavulwanga kwindawo ekuthengiswa kuyo igaraji, awunalo nofifi lokuba ihleli ixesha elingakanani. Iimolekyuli zakudala, eziphelelwe lixesha kungenzeka ziqalisile ukonakala, ezinokubangela ukucaphuka kunye nokudumba . Kwaye ukuba sele isetyenzisiwe (yuck), kutheni ungayifuna? Endaweni yoko khetha oku 2 kwi-1 Liptocheek Umbala wePot Ukugqibezela okuhle, kwendalo kwimilebe yomibini nasezidleleni.
Iimpawu zokuLoba ezindala IJCJGPHOTOGRAPHY / ISHUTTERSTOCK
Ubunzima bokuloba yenye imveliso eqhele ukwenziwa ngelothe, kwaye ngelixa ubuchwepheshe busemthethweni kwiindawo ezininzi, banako ityhefu kwizilwanyana zasendle xa ilahlekile emilanjeni nasemilanjeni. Izitshizi zeediliya ngokuqinisekileyo zenziwe ngokukhokela, ke zidlulisele endaweni yazo zithanda ezitsha ezenziwe ngentsimbi okanye ngetoti.
Isivuno seDishware MAREKULIASZ / SHUTTERSTOCK
Isitya esidala se-ceramic dish esifaka njenge-Fiestaware sinokuqulatha ipeyinti ekhokelayo, nangona kunokuba nzima ukwazi ngokuqinisekileyo ngaphandle kokuba kuvavanywe. I-FDA ixelele Iphephancwadi iSmithsonian ukuba baqale ukunyanzelisa imida ekukhokeleni okufikelelekayo kwitafile ye-tableware malunga neminyaka engama-40 eyadlulayo, nangona bancomela kuphela ukulahla iziqwenga ukuba zibotshiwe okanye zitshixiwe, nto leyo eyenza ukuba i-leaching ibekho. Okukwintsusa: Qhubeka ngononophelo.
Ithemometha ezindala ISSARAPONG SRIRUNGPANICH / SHUTTERSTOCK
Iithemometha zeAntique zihlala zisetyenziswa kwimekyuri, isinyithi esingamanzi esincipha kwaye sandise kuxhomekeke kubushushu. Baye bancitshiswa kakhulu ngenxa yokuba i-mercury inetyhefu ukuba ifunxwe ngesixa esikhulu (ekugqibeleni iyajika ibe ngumphunga xa ikhutshwa kwi-vial). Uya kwazi ukuba unayo ithemometha ye-mercury kuba ulwelo olukuyo luyisilivere, alubomvu. (Iithemometha ezibomvu zisekwe etywaleni.) Ukuba ufumana ithemometha oyithandayo, jonga iimpawu zokonakala (ezinokukhokelela kuqhekeko) ngaphambi kokuba uye ekhaya.
isizini 5 sobabalo nefrankie
whats 555 kuthetha
imithambo elula yokulahla amanqatha esisu
njani ukuba nolusu olujonge kancinci